Projektii Biyyoomsa OpenOffice.org Afaan Oromoo
OpenOffice.org Afaan Oromoo sirna mosajjii ofiisii madda-banaa barruu hujeessuuf, wardiiwwaniif, dhiheessaaf, fakkasaaf, kuusdeetaafi kan kana fakkaataniif fayyadudha. Mosajjiin kun deetaa kee mara dhangii waaltinaa madda-banaa addunyaatiin siif olkaa'uu dabalatee mosajjiiwwan ofiisii baratamoorraa faayiloota dubbisuufi barreessuu ni danda'a. Sirna Afaan Oromooo hojjetame kana guutumaan guutuutti baasii malee buufattee itti fayyadamuu ni dandeessa. Sirni kunis kan biyyoome Dhaabbata Dambii Treediingiitiini.
OpenOffice.org Afan Oromo 3.3.0 (Windows) addana cuqaasuun buufachuu ni dandeessa
Birkiilee Afaanii kan akka to'ataaQubeeffannoo(spellchecker), moggoolee(synonyms) addana cuqaasuun buufachuu ni dandeessa. Ittaansuun faayilii buufame cuunfuudhaan(by extracting) Nadubbisii laatameen gargaaramuun birkiilee kana OpenOffice.org Afan Oromo 3.2 irratti fe'achuun itti maayii bahuu ni dandeessa.
Mosajjiin kun kan fayyadu:
Hojiilee Teeknoolojii Odeeffannoof
OpenOffice.org Afan Oromoo bu'aa Sooftiweer Injinariingii kan waggaa 20 oliiti. Kunis wanta sirni ofiisii tokko akka siif hojjetu barbaaddu kamiyyuu, haala barbaaddeen, guutumaan guutuutti Afaan Oromootiin siif hojjeta.
OpenOffice.org Afaan Oromoo barachuuf salphaafi sirna ofiisii biraa kan fayyadamaa jirtu yoo tahe gara sirna kanaatti madaquun salphaadha. Faayiloota sirna ofiisii biroo yoo qabaatte, openOffice.org Afaan Oromoo rakkoo tokko malee siif dubbisa.
Waa hundarraa, OpenOffice.org Afaan Oromoo baasii tokko malee buufattee itti fayyadamuu dandeessa. OpenOffice.org Afaan Oromoo hayyamtaa LGPLtiin gadhiifama. Kana jechuun faayidaa kamiifiyyuu itti fayyadamuu dandeessa.